Real Madrid & Barcelona oo gawsaha laga garaacay Spanish La Liga (warbixin+sawiro) – SBC
Real Madrid & Barcelona oo gawsaha laga garaacay Spanish La Liga (warbixin+sawiro)
Posted by editor on May 1, 2011 Comments
Labada kooxood ee aduunka ugu caansan isla markaana sida joogtada ah ugu xisaabtama guusha kubada cagta ee horyaalka wadanka Spian ee La Liga ayaa caawa natiijo aanay fileyn oo aan caado u aheyn waxay kala baxeen garoomada ka dib markii si kala duwan looga badiyey.
Kooxda Real Sociedad ayaa gurigeeda Estadio Anoeta ku marti galisay kooxda aduunka ugu sareysa kubada cagta Barcelona waxaana daqiiqadii 19-aad gool uu u dhaliyey Barcelona ciyaaryahanka Thiago Alcantara si la yaab leh isaga soo guday kooxda oo kaalinta 11 kaga jirta horyaalka Spian. Daqiiqadii 71 ayaa ciyaaryahanka Diego Ifran wuxuu Real Sociedad u suurtagaliyey goolkii barbardhaca taasi oo hawl iyo shaqo hor leh ku noqotey weeraryahanada Barca oo isku dayey inay si xarago leh ciyaarta ku dhameystaan.
10 daqiio iyadoo ay ka dhiman tahay ayaa difaaca Barcelona Javier Mascherano oo badal ciyaarta ku soo galey wuxuu khalad ku galey Antoine Griezmann taasi oo horsdeeday in garsoorihii uu gool ku laad ama rigoore u dhigo Real Sociedad waxaana ciyaartii ku sidaasi ku noqotey 2-1 oo ay hogaanka ciyaarta ku qabsatey Sociedad Real. Macalinka Barcelona Pep Guardiola wuxuu ciyuaartii caawa nasiyey xidigo muhiim ah oo uu u dhigtey ciyaarta talaadada Real Madrid uu la yeelanayo ee ka mid ah Simi Final-ka Champion-ka waxaana maqnaa David Villa, Pedro, Iniesta Puyol iyo waliba goolhaya caanka Victor Valdes.
Dhinaca kale Real Madrid oo aan wali ka soo kaban dharbaaxadii gurigeeda ku qabsatey ee Barcelona ay ku garaacdey 2-0 lugtii koowaad ee Champion League-ga ayaa mar kale isla gurigeeda Santiago Bernabeu waxaa caawa ku garaacdey 3-2 kooxda Real Zaragoza oo kaalinta 13 –aad kaga jirta horyaalka Spain.
Ciyaaryahan Angel Lafita ayaa caawa ahaa dayaxa Real Zaragoza ka dib markii laba gool uu si xarago leh uga dhaliyey goolyaha Real Madrid Iker Casillas halka goolka sadexaad oo ahaa rigoore ama gool ku laa uu dhaliyey ciyaaryahan Gabi.
Real Madrid oo isku dayeysay inay ceebta labaad ee mudo asbuuc ku qabsata gurigeeda Santiago Bernabeu ay iska dhaqdo ayaa laba gool u suurtagashay kuwaasi oo ay u saxiixeen Sergio Ramos & Karim Benzema waxaana ay ku dhameysteen ciyaarta 10 nin ka dib markii uu daqiiqadii 86-aad kaarka cas qaatey xidiga difaaca ka ciyaara Ricardo Carvalho kaasi oo seegi doono ciyaarta adage ee Real ay la yeelanayso Sevila oo ay waliba ay u tahay marti ama Away Game.
Si kastaba ha ahaatee dharbaaxiooyinka caawa ku dhacay Real & Barcelona ayaa la aaminsan yahay inay ugu wacan tahay labadan kooxood oo awoodoodii sida weyn u isticmaalay ciyaartii todobaadkii hore ay yeesheen ee ka tirsaneyd Champion League.